merolagani - सिन्धु विकास बैंकको खुद नाफा उच्च सुधारियो
सिन्धु विकास बैंकको खुद नाफा उच्च सुधारियो
Nov 14, 2018 Merolagani
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सिन्धु विकास बैंकले एक करोड एक लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ९० लाख रुपैयाँले धेरै हो। गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले १० लाख ९५ लाख रुपैयाँ मात्र कमाएको थियो ।
खर्चका सूचकहरुलाई सन्तुलन गर्दै खुद ब्याज आम्दानी बढाउँदा बैंकले नाफा बढाउन सफल भएको हो। यद्यपी बैंककाे कर्मचारी खर्चमा उच्च वृद्दि भएकाले यसकाे नियन्त्रणमा व्यवस्थापनले जाेड दिनुपर्छ ।
यस त्रैमासमा बैंकले दुई करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७४ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष बैंकले एक करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ८ करोड ९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।
बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहलाई जोड दिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकले एक अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरर एक अर्ब ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ ।
गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा बैंकले २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँले धेरै निक्षेप संकलन गरेको हो भने ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँले धेरै कर्जा परिचालन गरेको हो ।
बैंकले निष्कृय कर्जामा पनि सुधार गरेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा १.३९ प्रतिशत रहेको निष्कृय कर्जा अनुपात झिनो प्रतिशतले सुधारेर १.३२ प्रतिशतमा झारेको छ ।
बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ १२ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ ११६ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १५.२५ गुणा बढी छ ।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा बढ्यो, प्रति शेयर आम्दानी कति ?
देव विकास बैंकमा विलिन हुन लागेको सहारा विकास बैंक नोक्सानीमा
मिसन डेभलपमेण्ड बैंकको खुद नाफा घट्यो
कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ६५ पैसा !
एक प्रतिशत बोनस बाँडेर १ रुपैयाँ नै प्रतिशेयर आम्दानी बनाउने बैंक चिन्नुहोस्
ओम डेभलपमेन्टको प्राइमसँग विलिनपूर्व चम्कियो प्रगति
दुई बैंकले कायम गरेनन् राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको स्प्रेड दर, के होला कारवाही ?
Aug 13, 2020 05:14 PM
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार दुई वाणिज्य बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) कायम नगरेको पाइएको छ। केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंक र कृषि विकास बैंकले असार मसान्तसम्म केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसारको स्प्रेड कायम गरेका छैनन्।
थप चार जनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन,कुल संख्या ९५ पुग्याे
Aug 13, 2020 04:51 PM
काठमाडाैं उपत्यकामा १२७ जना कोरोना संक्रमित थपिए, देशभर ५२५ जना
Aug 13, 2020 04:38 PM
१५ दिन सरकारी कर्मचारी 'वर्क फर्म होम" मा,अत्यावश्यक काम बाहेक सबै बन्द
Aug 13, 2020 04:20 PM
Aug 13, 2020 04:18 PM
Aug 13, 2020 04:07 PM